Nezvedu - Taili Industrial Co, Ltd.
Taili Industrial Co, Ltd.
Sangano repasi rese rakabatana-sitandi muChina, rinopinda muR & D, kugadzira uye kutengesa.
Taili Industrial Co, Ltd. yenyika-yakabatana-sitendi mubatanidzwa muChina, inoita R&D, kugadzira uye kutengesa.
Bhizimusi rave richichengeta pfungwa ye "kukwikwidza, kuvandudza, kupayona, kufambira mberi" iyo inowana musika nevatengi pamusoro pezvekuvandudza uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kubvira gore rekutanga ra1984. Bhizinesi iri ikozvino rakanyoresa capital of 110 miriyoni yuan, anopfuura zviuru zviviri vashandi uye vanoda kusvika zviuru makumi mashanu emamita emamirita yakagadzirirwa fekitori Kune zviuru zvevamiririri uye vanopfuura makumi mashanu vega vekuparadzira varimunyika.
Bhizinesi hombe reTaili rinosanganisira zvigadzirwa zvinopfuura zviuru zviviri zvakatsanangurwa muzvikamu gumi zvinosanganisira: switch, socket, wedunhu breaker, wiring accessory kifaa, imba yekugezesa, ex fan fan, magetsi, mudziyo wemagetsi uye automation yemumba. Zvigadzirwa izvi zvinotumirwa kuEurope, Africa, Middle East, South America, Russia, Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu. Iyo huru chigadzirwa mhando, yakanakisa kugona kweR & D uye nekukurumidza kurongedza kutumira haina kungozivikanwa inozivikanwa kubva kumarudzi akawanda mafemu asiwo yakatanga kusangana kwenguva refu kubatana navo.
Taili inoramba ichienderera uye kusimudzira kwayo chibereko kuburikidza nenguva. Yakavakirwa pazvivakwa zvavo zvakaringana uye zvakazvimiririra uye zvigadzirwa, Taili haina kumboregedza nhanho dzekugadziridza mune zveatomendi uye zvemazuva ano manejimendi. Chigadzirwa chimwe nechimwe chinofanira kupfuura nematanho akawanda ekugadzirwa zvakaenzana uye kuongororwa. Nhengo yeTaili yega yega inoteedzera kutarisa kune ese maficha ezvakagadzirwa uye kunaka. Pane maretifiketi mazhinji akapasiswa uye akagamuchirwa naTaili anosanganisira "CCC", "CB", "CE", "TUV", "VDE", "NF" uye "SAA". Pamusoro pezvo, Taili akakunda mazita e "National High-tech Enterprise", "Zhejiang Famous Brand Brand", "Tsika AEO Advanced Certification Enterprise" uye zvimwe zvikwereti.
“Kubva pane vanhu vane matarenda; anokunda musika nemhando; kufambira mberi kuburikidza neunyanzvi; kukura pane kutendeka. Ichiri kuvandudza nekusimudzira timu yaro yeR & D nenzvimbo, Taili iri kuvandudza nekusimudzira hurongwa hwe manejimendi uye kugona kweR & D. Sangano rekutsvaga mabhizinesi rakawana mvumo kubva kuhurumende yematunhu. Taili inoramba ichienderera mberi mukusiyana-siyana, kutsikisa uye kuwedzera. Kunyangwe munguva yakakosha, Taili anogara achitenda kuti Taili ichagara ichienderera mberi pamwe nevabatsiri kukurira zvipingamupinyi uye kuunza kubwinya kunoenderana newakakwira uye basa rakakura.